XOG: 10 Laacib Oo Horyaalka Premier League Hore Uga Soo Ciyaaray Oo Hadda Ku Sugan Bundesliga & Kooxaha Lagu Daawan Doono Maanta & Berri - Gool24.Net
XOG: 10 Laacib Oo Horyaalka Premier League Hore Uga Soo Ciyaaray Oo Hadda Ku Sugan Bundesliga & Kooxaha Lagu Daawan Doono Maanta & Berri
Indhaha caalamka oo dhan, waxay maanta ku foognaanayaan waddanka Jarmalka oo ay ka daawan doonaan horyaalka weyn ee ugu horreeya ee dib u bilaabmay intii ka dambaysay fayraska ciyaaraha loo joojiyey.
Bayern Munich ayaa kulankeeda berri oo Axad ah ciyaari doonta, laakiin Borussia Dortmund oo soo urursatay laacibiin cajiib ah oo ay dad badan xiisaynayaan inay fiirsadaan iyaga oo garoonka ku jira iyo naadiga gool-dhalintu fasaxa u tahay ee RB Leipzing ayaa ciyaarahoodu maanta dhacayaan.
Horyaallada Premier League, LaLiga iyo Serie A ayaa tusaale ka dhigan doona Jarmalka iyaga oo kaga dayan doona sida loo maamulayo ciyaaraha xilli laga baqayo fayraska Korona oo ay garoomadu madhan yihiin.
Taageereyaasha kooxaha Ingiriiska ayaa waxay si gaar ah u daawan doonaan ciyaartooyo hore kooxahooda ugu ciyaari jiray oo hadda jooga Bundesliga, laakiin aanay hore waqti ugu heli jirin inay la socdaan qaab-ciyaareedkooda iyo sida ay isku beddeleen intii ay kasoo maqnaayeen iyaga.
Halkan waxaanu idiinku soo gudbinaynaa toban ciyaartoy oo kooxaha Ingiriiska ee Premier League hore ugu soo ciyaaray oo usbuucan lagu daawan doono Bundesliga.
Serge Gnabry – Bayern Munich – 24 jir hore ugu soo ciyaaray Arsenal iyo West Bromwich, haddana ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan ee Bayern Munich.
Philippe Coutinho – 27 jirkan ayaa Bayern Munich ugu maqan amaah ay kaga qaadatay Barcelona. Laacibkan hore ee Liverpool ee khadka dhexe, waxa uu usbuucan fursad u haystaa inuu isku muujiyo dadkii shakiga hore u gelinayay kartidiisa oo uu qaabkii Anfield dib usoo xasuusiyo.
Andrej Kramaric – Weeraryahankii hore ee Leicester City, waxa uu hadda joogaa TSG 1899 Hoffenheim
Dedryck Boyata – Hertha BSC ayuu u ciyaaraa, horena waxa uu difaaca ugaga soo dheelay Manchester City
Marko Grujic – Liverpool ayaa amaah ugu dirtay Hertha BSC, maanta ayayna jamaahiirta Reds qiimayn doonaan iyagoo si toos ah u daawanaya waxa iska beddelay xirfaddiisa muddada uu Jarmalka joogay.
Matija Nastasic – Laba sannadood ayuu laacibkan reer Serbia ku qaatay Manchester City oo uu xili ciyaareedkii 2013-14 kula guuleystay League Cup iyo Premier League, haddana waxa uu ka tirsan yahay FC Schalke 04.
Peter Gulacsi – Goolhayihii hore ee Liverpool, waxa uu waqtigan ku sugan yahay RB Leipzing.
Davy Klaassen – Laacibkan reer Netherlands ee 27 jirka ah waxa taariikhdiisa ugu jirta xilli uu kasoo ciyaaray Everton, haddana waxa uu ka tirsan yahay SV Werder Bremen.
Jonjoe Kenny – Everton ayaa amaah ku siisay FC Schalke 04, waxaanu difaacan midig noqday doorashada koowaad ee kooxdaas tan iyo intii uu tegay.
Stephan Lichtsteiner – Cimrigiisa waxa uu ku qaatay Juventus, laakii 36 jirkan ayaa Arsenal ku yara hakaday 2018-19 ka hor intii aanu usii dhaafin FC Augsburg.
Jibriil osmaan abuukar says:
Waa ino marka le I.a